L’objectif de ce cours est de présenter les xirfadaha xisaabinta, xakamaynta iyo hanti dhawrka wajiyadooda kala duwan iyo sidoo kale waddooyinka tababarka ee suurtogalka ah.
Xirfadahani waa kuwo aad u tiro badan, aad u kala duwan waxayna ka jiraan dhammaan noocyada ururada. Waxay bixiyaan fursado shaqo oo badan, heerar kala duwan. Si aad ugu guulaysato xirfadahan, waa inaad tirooyinka jacaylka adigoon xisaabta ku wanaagsanayn, si aad u noqoto adag, hal abuur leh, cajiib ah, leeyihiin a xirfado isdhexgal oo wanaagsan, la qabsan kara
Koorsooyinka tababarku waa ogol yihiin xirfado adag ka helaan meelo badan oo maamulka ah. Waxay ujeedadoodu tahay inay tababaraan dadka awoodi doona inay la qabsadaan xirfadaha degdega ah ee isbeddelaya, gaar ahaan sababtoo ah tignoolajiyada cusub.
Xirfadaha xisaabaadka iyo maamulka Diisambar 16, 2021Tranquillus
READ Heshiisyada wadajirka ah: miyay tahay inaad ku siiso gunno isbeddel shaqaalaha ku jira fasaxa umusha?
horeXeeladaha ogaanshaha kansarka
socdaU fiirso xirfadaha kiimikaad ee berrito
Tababarayaasha shaqada-barashada ee da'da yar: Caawinta loo-shaqeeyayaasha ee door bidaaya shaqaalayntaada ayaa la kordhiyay ilaa Juun 2022